in Celebrity, Uncategorized, Unique Things
အချို့သောအနုပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ဝါသနာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအရ အတန်းပညာ၊ ကျောင်းပညာရေးကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း ဉာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ တကယ့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေထက်ကို ဉာဏ်ရည်မြင့်မားနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်လည်းဆိုတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ကိုတိုင်းတာတွက်ချက်မှုအရ ဘယ်လောက်ထိရှိလည်းဆိုတာကို သိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လေးနှစ်သမီးမှာ ကဗျာစရေးပြီး ၁၃နှစ်သမီးအရွယ်မှာ ပထမဆုံးသီချင်းအယ်လ်ဘမ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တဲ့ ရှာကီရာဟာ အိုင်ကျူ ၁၄၀ ရှိပြီး ဘာသာစကား
ကျောင်းသူဘဝတလျှောက်လုံးမှာ ပညာရည်ထူးချွန်ခဲ့ပြီး ဓာတုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ သူမသည် နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တခုကနေ ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမယ့် အမှတ်မထင်ဘဲ ကင်မရာတလုံးက သူမရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ထူးချွန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာကျော်မော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်နဲ့တော့ သူမကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Matt Damon ဟာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝထဲက သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့
Good Will Hunting ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဟားဗတ်ကနေဘွဲ့မရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း နာမည်ကြီးမင်းသား Ben Affleck နဲ့အတူ
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းအကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ IQ တိုင်းတာစစ်ဆေးချက်များအရ Matt Damonရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဟာ IQ 160 ထက်မလျော့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုယ်ကနေ စိတ်ပညာအထူးပြုနဲ့ဘွဲ့ရရှိထားတဲ့ သူမဟာ ဘာသာစကား ၅ မျိုးကို ပြောဆိုနိုင်ပြီး သူမရဲ့ IQ ကိုစစ်ဆေးတိုင်တာချက်အရ
5. Chris Martin ( Coldplay )
လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာ ရှေးဟောင်းသုတေသနဘာသာရပ်အထူးပြုလေ့လာခဲ့ပြီး ဂရိနဲ့ လက်တင်ဘာသာရပ်တွေမှာ ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Chris Martin သည် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာဘဲ သူရဲ့တီးဝိုင်းအဖွဲ့သားတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ရဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ရှေးဟောင်းအနုပညာအငွေ့အသက်တွေကို ခံစားရတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၄ နှစ်သားမှာ ကိုယ်ပိုင်လက်ရာကောင်းတွေကို စတင်ရေးသားပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကို အမြဲလိုစဉ်းစားနေခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာ Quentin Tarantino သည် မည်သည့်တက္ကသိုလ်ကမှ ဘွဲ့မရရှိခဲ့သလို သူ့အတွက် လိုလည်းမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ IQ 160 ဆိုတဲ့ ဉာဏ်ရည်ဟာ အော်စကာဆုနှစ်ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်နေတဲ့အပြင် ပိုတောင်ပိုလျှံနေလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃ နှစ်သမီးအရွယ်မှာ သရုပ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး ၁၂နှစ်သမီးအရွယ်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ Jodie Foster သည် အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်မှာတော့ ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို အနားယူခဲ့ပါတယ်။ Yale တက္ကသိုလ်ကနေ magna cum laude ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရုပ်ရှင်လောကကိုပြန်လည်အခြေချတဲ့အခါမှာလည်း ဟောလိဝုဒ်သည် သူမကို အမြတ်တနိုးထားကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
The X-Files ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်မဆောင်ခင်က David Duchovny သည် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုမဟာဘွဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ပါရဂူဘွဲ့ယူဖို့အတွက် စာတမ်းတင်သွင်းနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် The X-Files ရုပ်ရှင်ဟာ သူ့ကို တက္ကသိုလ်ဆရာတယောက်ထက် သရုပ်ဆောင်တယောက်ဘဝကို ရွေးချယ်စေခဲ့ပါတယ်။
အကယ်ဒမီဆု ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Geena Davis သည် ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး စန္ဒရားနဲ့ ပလွေကို ကျွမ်းကျင်စွာတီးမှုတ်
နိုင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Geena Davis သည် ဆွီဒင်ဘာသာစကားကိုလည်း ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဝင်ခွင့်
ရရှိတဲ့ Mensa Organization ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို VIP club ကိုဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဆို IQ 135 ထက်ရှိဖို့လိုအပ်ပြီး Geena Davis ရဲ့
IQ ကတော့ 140 ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
သူမရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကိုသတိထားမိခဲ့တဲ့ ဆရာတွေကြောင့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်မှာ ဒုတိယတန်းကို တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာတော့ ပညာသင်ဆုရရှိကာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ IQ 154 ရှိတဲ့ သူမလိုဉာဏ်ရည်မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေဟာ တကမ္ဘာလုံးလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆို 0.1 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ပညာရေးနယ်ပယ်သည် ဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ပါရမီရှင်တွေကို ပညာရေးအလုပ်အကိုင်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဖို့ စွဲဆောင်နိုင်ခြေအားနည်းလွန်းတယ်ဆိုတာကို နောက်ထပ်တဖန်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဖြစ်လို့ဆိုရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Steve Martin သည် ဒသနိကဗေဒဘာသာရပ်မှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်ခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းဆရာတဦးရဲ့ ဘဝသည် သူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့မယူဆခဲ့တာကြောင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Steve Martin သည် တက္ကသိုလ်ပညာရေးမပြီးဆုံးခဲ့ပေမယ့်လည်း IQ 135 အထက်ရှိတဲ့သူတွေသာ ဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့ Mensa Organization အဖွဲ့ကိုတော့ အလွယ်တကူဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လူကြိုက်များကျော်ကြားတဲ့ သူ့ရဲ့ Mr. Bean ဇာတ်ကောင်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ Rowan Atkinson သည် IQ 178 ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ Mr. Bean သည် ကျောင်းသားဘဝမှာကတည်းက ပညာရေးထူးချွန်မှုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တယောက်ဘဝသို့ မပြောင်းလဲခင်က နယူးကာဆယ်တက္ကသိုလ်မှ အင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပြီး အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုက အဝတ်အစားတွေမှာ "genders "ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဒါက အမျိုးသမီး ဝတ်ရမယ့် အဝတ်အစား၊ ဒါက အမျိုးသားဝတ်ရမယ့် အဝတ်အစားဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် ဒီလောကကြီးမှာ သူဝတ်ချင်တာ ဘာမဆို ဝတ်ဆင်တတ်တဲ့၊...
Boys Over Flowers(F4) ဇာတ်လမ်းတွဲကို F4 Thailand အဖြစ် ထိုင်းသရုပ်ဆောင်များနဲ့ ပြန်လည်ဖန်တီးရိုက်ကူး
အောင်မြင်မှုတွေတစ်သီကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Boys Over Flowers ကို သက်တမ်းတစ်လျှောက် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီကနေ့မှာတော့ Boys Over Flwers ကိုပဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထိုင်းသရုပ်ဆောင်များဖြင့် ပြန်လည်ဖန်တီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Boys...